सबैभन्दा लामो अंग्रेजी शब्द !! जसलाई पढ्न साढे ३ घण्टा लाग्छ - Lekhapadhi राेचक प्रसंग : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी १२ बैशाख २०७८, आईतवार ११:१६ मा प्रकाशित
एजेन्सी। आम रुपमा मानिसहरुलाई युरोपको कुनैबेलाको मुलुक (हाल टुक्रिसकेको) चेकोस्लोभाकिया (Czechoslovakia) जस्ता अंग्रेजी शव्द उच्चारणसमेत गाह्रो हुन्छ । तर जब कुनै एउटा अंग्रेजी शव्द उच्चारण गर्नका लागि साढे ३ घण्टा लाग्यो भने के होला ?
वैज्ञानिक किन डिजिटल प्रविधि बालबालिकाको मस्तिष्क र बौद्धिक विकासका लागि राम्रो हुँदैन भन्छन् सर्पका बारेमा राेचक तथ्य
मास्क पराठाः काेराेनाबारे सतर्कता सन्देश दिन मास्ककाे आकारमा राेटी बनाए रेष्टुरेन्टमा
रातमा कुकुर किन धेरै भुक्ने गर्छ ? थाहा पाउनुस